﻿	အကယ်၍ ကပ်ခွာပြား မှအရေပြားယားယံမှု ရှိနေလျှင် ဘာလုပ်ရမည်နည်း ? | Find My Method
အကယ်၍ ကပ်ခွာပြား မှအရေပြားယားယံမှု ရှိနေလျှင် ဘာလုပ်ရမည်နည်း ?
မကြာခဏမေးသောမေးခွန်းများ » ကပ်ခွာပြား » အကယ်၍ ကပ်ခွာပြား မှအရေပြားယားယံမှု ရှိနေလျှင် ဘာလုပ်ရမည်နည်း ?
အမျိုးသမီးအချို့သည် ကော်မှ ယားယံခြင်းကို ခံစားရသည်။
ဒီလိုလုပ်ကြည့်ပါ – ကပ်ခွာပြား ကို အခြားအကြံပြုထားသောနေရာသို့ ပြောင်းကြည့်ပါ။ ၎င်းသည် ထိရောက်မှုကို နည်းကောင်းနည်းသွားစေနိုင်သည်။ အကယ်၍ သင်သည်၎င်းကိုလှည့်ပြောင်းနေခဲ့ပါက တစ်နေရာတည်းတွင် ထားရှိရန်ကြိုးစားပါ။ သင့်အရေပြား ယားယံနေဆဲဖြစ်ပါက cortisone cream အနည်းငယ်သုံးပါ။ ၎င်းအားဖြင့် မြန်မြန်ပိုကောင်းလာနိုင်သည်။
အလုပ်မဖြစ်သေးဘူးလား။ ပိုကောင်းလာပါက ကော်မပါသည့် နည်းလမ်းကိုစဉ်းစားပါ။ ကပ်ခွာပြား အပြင် စဉ်းစားနိုင်သည့် ရွေးချယ်ခွင့်အချို့မှာ – ထိုးဆေး၊ implant၊ IUD, အဝိုင်းကွင်း
အခြားနည်းလမ်းသုံးမယ်-implant၊ IUD, အဝိုင်းကွင်း၊ ထိုးဆေး